Nnwom 51 NA-TWI - Bɔne fafiri mpaebɔ - Hu me mmɔbɔ, O - Bible Gateway
Nnwom 50Nnwom 52
Nnwom 51 Nkwa Asem (NA-TWI)
51 Hu me mmɔbɔ, O Onyankopɔn, wɔ dɔ a wodɔ me daa nti. Esiane w’ahummɔbɔ kɛse nti, popa me bɔne! 2 Hohoro m’amumɔyɛ nyinaa na tew me ho fi me bɔne mu! 3 Mihu me mfomso; daa mekae me bɔne. 4 Mayɛ bɔne atia wo; atia wo nko. Na mayɛ nea woka se ɛyɛ amumɔyɛ. Enti sɛ wubu me atɛn a, na ɛfata. Na wudi bem nso sɛ wubu me fɔ. 5 Meyɛ bɔne fi m’awosu mu; efi da a wɔwoo me no, na meyɛ bɔne. 6 Nokware na wohwehwɛ. Fa wo nyansa hyɛ m’adwene mu.